Waa kuma ninka u kala dillaalay Xaaf iyo Imaaraatka? - Caasimada Online
Home Warar Waa kuma ninka u kala dillaalay Xaaf iyo Imaaraatka?
Waa kuma ninka u kala dillaalay Xaaf iyo Imaaraatka?
Muqdisho (Caasimadda Online) – Thoman B. Coleman waa Mareekan asal ahaan kasoo jeeda Kuuriyada Koonfureed. Wuxuu kamid ahaa Ciidamada Badda Mareekanka, halkaas oo uu muddo kasoo shaqeeyey, wuxuu ku guulaystay hawlgallo ay kasameeyeen Ciidamada Badda Mareekanka waddamada Honduras iyo Nicaragua oo dhaca Koonfurta Mareekanka.
Bilowgii qalaalasaha Khaliijka, ayaa madax ka socota Shirkadda Levant Suez Consulting Corp. waxay yimaadeen Muqdisho, iyadoo Safaaradda Imaaraatku ay waddanka soogelisay, waxay la shireen dilaalo ka socday madaxda maamul goboleedada.
Waxaa jirta iyadana warar sheegaya in Puntland iyo Somaliland ay iyana qaateen lacago, waxaa dhammeeyey oo ka shaqeeyey arintaas Raysalwasaarihii hore CCC oo isagu u ah lataliye Dowladda Imaaraatka ee Geeska Afrika.